Wikiality, Chokwadi, uye Kururama | Martech Zone
Wikiality, Chokwadi, uye Kururamisa
China, August 3, 2006 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Zvinotaridza kuti Colbert chirevo chakonzera mhirizhonga paWikipedia nechikamu ichi chitsva paWikiality.
Wikipedia inovhara shanduko kuNzou
Iko kunogara kuine zano rechokwadi kunyomba kwaColbert kwandinokoshesa. Mune ino kesi, Wikiality ingori shanduko yesimba rekupepeta. Vaviri vakataura ... "Simba rakazara rinokanganisa zvachose" uye "Nhoroondo yakanyorwa nevakundi". Ndinokumbira ruregerero nekusatora nguva kukwereta makotesheni aya.
Pfungwa yangu ndeyekuti Wikiality inobvumira vanhu kuseka nekumonyanisa chokwadi seimwe mimwe mienzaniso yatakanzwa kubva kuhurumende yedu uye nhepfenyuro huru:
CBS yakazviita nemagwaro enhema
Bush akaita nezvombo zveMisa Kuparadza
Bhaibheri (Verenga Kusanzwisisa Jesu), ChiJudha, ChiIslam…
Sayenzi, Al Gore uye Global Warming
Kuparadzaniswa kweChechi neHurumende
Handisi kuti chero yemienzaniso iripamusoro ichokwadi kana fungidziro… asi iyo nharo inotiratidza kuti vanhu vanogona kushandiswa nyore nyore. Kana ndine degree rezvenhau, ndinofanira kunge ndiri kutaura chokwadi. Kana ndikanyora bhuku, ndinofanira kunge ndiri nyanzvi. Kana bato rangu rezvematongerwo enyika rikazvitaura, ndizvozvo.
"Chokwadi" uye "Kururamisa" hunyengeri hunodudzirwa nemunhu anozvitaura saizvozvo. Colbert na "Wikiality" vakangozviisa mukutarisa. Kana kuri kudzoreredza kwe "blogosphere", iwe haunzwe kuridza mhere kubva kwatiri! Tiri kufara nekuti tanga tichitaura nezvazvo kwenguva yakati rebei. Kusiyana nebhuku, pepanhau, nhepfenyuro yenhau, kana hurumende, zvakadaro, internet inobvumidza vanhu kukakavadzana kuti ichokwadi nekururama chii!
Ndicho chikonzero Wikiality yakanaka!
Blog Kutumira Kuenzanisa